Ignoring deal with MDC, Mugabe moves to form new government
Issued on: 03/01/2009 - 16:27 Modified: 03/01/2009 - 18:00
Defying a power-sharing deal signed on September 15 with the opposition Movement for Democratic Change, Zimbabwean President Robert Mugabe seems intent on forming a new government giving the opposition a minor role only.
REUTERS - Zimbabwe's President Robert Mugabe has started preparations to form a government despite opposition objections, firing a dozen ministers from his ZANU-PF party to clear the way for a new cabinet, state media said on Saturday.
"What I can tell you is that President Mugabe has already started preparing an administration," George Charamba, Mugabe's spokesman told the state-owned Herald newspaper.
Analysts say a government without international support would be doomed and could deepen an economic meltdown and a humanitarian catastrophe, worsened by a cholera outbreak that has killed more than 1,600 Zimbabweans.
"They did meet and agreed that the nomination of cabinet ministers can only be done collectively by the leaders of the three parties, and so they resolved to do whatever is necessary to have a meeting of the three leaders," Welshman Ncube, secretary general of the MDC faction told Reuters.
In the envisaged unity government -- brokered by former South African President Thabo Mbeki -- Mugabe's ZANU-PF will have 15 ministries, Tsvangirai's MDC 13 and three will be allocated to Mutambara's group.